Mailflow: Tinye Autoresponders na akpaaka Email usoro | Martech Zone
Otu n'ime ụlọ ọrụ ahụ nwere ebe ikpo okwu ebe njigide ndị ahịa jikọtara ya na ojiji nke ikpo okwu. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ndị ahịa ji ya mere ihe ịga nke ọma. Ndị ahịa ahụ gbara mgba hapụrụ. Nke ahụ abụghị ihe ọhụrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla.
N'ihi ya, anyị mepụtara usoro ntanetị nke na-agụ ma na-akpasu onye ahịa iwe iwe iji ojiji nke ikpo okwu. Anyị nyere ha otu esi-vidiyo yana ọtụtụ echiche banyere otu esi eji ya. Ozugbo, anyị hụrụ mmụba nke ojiji, nke dugara na nsonaazụ, nke mechara duga njide ndị ahịa ka mma. Anyị na-akpaghị aka usoro a dị ka onye na-akwụ ụgwọ ozugbo ngwa ahịa onye ahịa dị njikere ma ha gụchaa ọzụzụ.
N'ihi ozi-e na-akpaghị aka, enwere obere ego iji mepee mmemme ahụ. Agbanyeghị, ọ gwụla ma anyị chọrọ iji nnukwu ego na oge mmepe, njikọta na akpaaka nke kpatara ozi email ga-eme site n'iji nnukwu ikpo okwu.
Ntughari ozi bụ ikpo okwu wuru kpọmkwem maka onye ọrụ njedebe ịdọrọ na dobe usoro email n'ime arụmọrụ.
Atụmatụ Mailflow Gụnyere
Automation - Mee usoro dị ka flowcharts na ịpị ole na ole. Jiri nlezianya depụta mkpọsa niile.
Icheta - Kwụsị iche echiche banyere ngalaba ma bido chewa maka ndị mmadụ n'otu n'otu ka izipu ozi gị nwere ike ịbụ nke onwe.
Oge oge - Zipu mkpọsa gị mgbe ndị nnata nabatara ha, karịa oge nke ụbọchị ma dabere na omume n'ezie.
WordPress - Jikọọ WordPress saịtị na sekọnd ka ike omenala iche na ịkpado ọrụ dabere na onsite omume.
Analytics - Echerela ruo mgbe ọ gwụchara - hụ n'ezie ihe na - arụ ọrụ ka ọ na - eme ma mezie mkpọsa gị na ijiji.
Mmekọrịta - A zuru API na nkwado maka iwulite njikọta omenala. Gụnyere ihe karịrị 400 ị ga-ekwe omume site na Zapier.
Onye zitere profaịlụ - Jikwaa otutu ahịa, mkpọsa na senders niile site na otu akaụntụ na-ekpo ọkụ gbanwee n'ime mkpọsa.
Nkpado - Mụtakwuo banyere ndị mmadụ n'otu n'otu n'ime ndị na-ege gị ntị dabere na omume ha na-eme na mkpọsa na ntanetị.
Oge - Tọọ oge na mpaghara, yabụ ị nwere ike izipu mgbasa ozi ọ bụla na oge kwesịrị ekwesị.
API zuru ezu - Mailflow e wuru site na API elu. Dum ọrụ na-agba ọsọ apụ anyị API nke gị nwekwara ike.
Tags: ntapu mkpọsanchịkọta emailemail apiakpaaka emailemail maka wordpressemail njikọtaozi emailemail usoroemail ezubere icheemail ogeemailflowflownzipu oziakụrụngwa ahịaonye nzipu ozi profaịlụogeWordPressemail wordpressike